Tababare Solskjær oo albaabada u furay inuu ka takhaluso mid ka mid ah xiddigaha Man United – Gool FM
Tababare Solskjær oo albaabada u furay inuu ka takhaluso mid ka mid ah xiddigaha Man United
Dajiye August 14, 2019
(Manchester) 14 Agoosto 2019. Wararka ka imaanaya gudaha dalka England ayaa waxay xaqiijinayaan in tababaraha kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær uu diyaar u yahay inuu ka takhaluso mid ka mid h xiddigha ku sugan Red Devils suuqan xagaaga.
Sida laga soo xigtay wargeyska “The Sun” ee dalka England, tababare Solskjær ayaa wuxuu ogolaaday inuu u dhaqaaqo xiddiga reer Chile ee Alexis Sanchez kooxda AS Roma ee dalka Talyaaniga inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga.
Maamulka Red Devils ayaa ogolaaday soo jeedintan, balse kaliya waxay sugayeen ogolaanshaha tababare Solskjær, waxayna arrintaan imaaneysaa xili uu xirmay suuqa xagaaga ee England, sidaas darteed bixitaankiisa Sanchez looma magdhabi doono saxiixa ciyaaryahan kale ee cusub.
Wargeyska ayaa wuxuu sidoo kale tilmaamay in Alexis Sanchez uu ugu wareegi doono kooxda Roma heshiis hal xili ciyaareed oo amaah ah, waxayna la micno tahay in United-ka ay bixin doonto qeyb ka mid ah mushaarka todobaadlaha ah uu qaato ciyaaryahanka ee gaarsiisan 505 kun ginni.
Muxuu ka yiri Virgil van Dijk qiimaha Harry Maguire uu dhawaan ugu dhaqaaqay kooxda Man United?
Manchester United oo fariin ku aadan arrinta Pogba u dirtay kooxda Real Madrid